14 2/2/2007-<font class="font7">WM(6)</font> 01.04.2008
BEE labeled Direct Cool Refrigerators as of June 29, 2007.
Instruction regarding Arbitration Cases-Amendment.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Minutes of the meeting held on 19.05.2009 under the Chairmanship of Engineer-in-Chief in his chamber to discuss the issue of strengthening /widening of roads.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Execution of works ? Approval of DNIT, DE etc.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Sanctioning of Annual Maintenance estimates for roads ? Based for actual requirements.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Execution of works on the roads which are under defect liability period.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Maintenance of roads by way of Surface Dressing.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Construction of culverts on PWD roads.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instructions regarding submission of Estimates.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Clearance of defect liability period.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instructions regarding calling explanation.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Review of ongoing works under head 3054 & 5054.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Widening of roads.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Maintenance of roads.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instruction regarding monitoring of major works.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instruction regarding competency of estimates.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instruction regarding competency to technical sanction the estimates.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Modification in Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) guidelines by Planning Commission of India.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instruction regarding estimates.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Inviting/Re-inviting tenders due to non approval of DNITs.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Transfer of all HSAMB rural roads of 6 Karam which or more to PWD (B&R) Deptt. as per the decision of Hon'ble Chief Minister Haryana.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Instructions regarding the enhancement cases.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Regarding approval for pre-mixed material.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Supply of bitumen for routine maintenance of roads.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Repair of roads damaged due rains.
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Maintenance of Roads
style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Special repair of roads by providing patch work and earth work on berms.